एमिकस क्युरी नै नपठाएर बारले दियो बेन्चलाई सन्देश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छैटौं पटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ । काठमाडौंकी ३१ वर्षीया महिलाले ३६ वर्षीय श्रीमान्‌लाई कलेजो दान दिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कलेजो प्रत्यारापण सर्जन डा. रमेशसिंह भण्डारीले शनिबार कलेजो प्रत्यारोपण भएको बताए । शल्यक्रियाका लागि १० घण्टा समय लागेको उनले जानकारी दिए । शल्यक्रियाका लागि भारतको नयाँदिल्लीस्थित फोर्टिस अस्पतालका डाक्टर विवेक विज र टिमको सहयोग रहेको पनि डा. भण्डारीले बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक २०७६ जेठ १७ गते कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ ०७:५५